Забур 80 CARS - Nnwom 80 ASCB
1Ao Israel dwanhwɛfoɔ, tie yɛn,
wo a wodii Yosef anim sɛdeɛ wɔdi nnwankuo anim;
wo a wote ahennwa so wɔ Kerubim ntam no, hyerɛn
Kanyane wo tumi;
bra bɛgye yɛn nkwa.
4Ao Otumfoɔ Awurade Onyankopɔn,
wʼabofuo bɛdɛre akɔsi da bɛn
wʼabofuo a ɛtia wo nkurɔfoɔ mpaeɛbɔ no?
5Wode nisuo yɛɛ aduane maa wɔn diiɛ;
wode nisuo kuruwa ma ma wɔnomeeɛ.
6Woama yɛn mfɛfoɔ abu yɛn animtiaa,
na yɛn atamfoɔ sere yɛn.
7Ao Otumfoɔ Onyankopɔn, gye yɛn bio;
8Wode bobe firi Misraim baeɛ;
wopamoo amanaman no na woduaaɛ.
ɛgyee nhini na ɛtrɛɛ asase no so.
10Ne nwunu kataa mmepɔ no so
ne mman kataa ntweneduro akɛseɛ no so.
11Ɛdendanee kɔɔ Ɛpo so,
na ɛfefɛ kɔduruu Asubɔnten no ho.
12Adɛn enti na woabubu nʼafasuo
ama wɔn a wɔtwam hɔ tete ne bobe aba no?
13Kɔkɔte firi wiram bɛsɛe no pasaa
na mmoadoma a ɛwɔ ɛserɛ so de yɛ wɔn aduane.
14Ao Otumfoɔ Onyankopɔn, sane bra yɛn nkyɛn!
Firi soro hɔ hwɛ na wobɛhunu!
15ntini a wo nsa nifa adua no,
ɔbabarima a woatete no ama wo ho no.
16Wɔatwa wo bobe no ato fam, ato mu ogya ama ahye;
wʼanimka ma wo nkurɔfoɔ ase tɔre.
onipa ba a woatete no ama wo ho no.
18Afei yɛrentwe yɛn ho mfiri wo nkyɛn;
kanyane yɛn, na yɛbɛbɔ wo din.
19Ao Otumfoɔ Awurade Onyankopɔn, gye yɛn bio,
ASCB : Nnwom 80